All Ebooks :: Malagasy :: Ireo izay Manadino (E BOOK)
HomeAll EbooksMalagasyIreo izay Manadino (E BOOK)
Ireo izay Manadino (E BOOK)
Tsy mahatsiaro izay natao taminy ary matetika misafidy ny hanadino ireo zavatra sasantsasany ireo olona mpikomy. Tsy nahatsiaro izay nataon’ ny Tompo ho azy i Jodasy, tsy tsarony ihany koa ireo hitany sy reny tamin’ I Jesosy.Izay ny antony nahatonga azy ho ilay nanana toe-tsaina ambany...
Ny fahafahana mahatsiaro dia isan’ ny kalitao ara-panahy manan-danja indrindra tokony ananan’ny mpanompon’ Andriamanitra. Ireo olona tsy mahatadidy dia tsy mahomby foana matetika. Tsy vitan’ izy ireo fotsiny tsotra izao ny misandratra amin’ ny ambonimbony kokoa. Ity boky miavaka mikasika an’ io foto-kevitra tsy dia firesaka firy ity, dia fanomezana avy amin’ Andriamanitra ho anao.